BBC Learning English - Course: How do I Burmese / Unit 1 / Session2/ Activity 1
บทเรียน 1: How do I
แสดงแถบตัวเลือกบทเรียนปิดแถบตัวเลือกบทเรียนบทเรียน 1 How do I
Listen to find out how to give someone advice in English
အင်္ဂလိပ်လို အကြံဉာဏ် ဘယ်လိုပေးရမလဲ။
အကြံပေးတဲ့အခါ 'should' က ပိုပြီးလေးနက်လား၊ 'have to' က ပိုလေးနက်လား။ အစီအစဉ်ကို နားထောင်ပြီး တခြားနည်းတွေလည်း လေ့လာကြည့်ပါဦး။
ကိုယ့်အဖြေမှန်လား နားထောင်ကြည့်ပါ။ အောက်က စာသားတွေနဲ့လည်း တိုက်ကြည့်ပါ။
Hello! ‘How do I ..’ အစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်မက ရီရီအောင်ပါ။ ကျွန်မနဲ့အတူ အစီအစဉ် တင်ဆက်မယ့် သူကတော့ Sian ပါ။ သူ လည်း အတူရှိနေပါတယ်။
ဒီကနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေကို အကြံပေးတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စကား သုံးပုံ သုံးနည်း အမျိုးမျိုးကို လေ့လာကြပါမယ်။ သူတို့ ပြောတာ လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားမလည်ရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့၊ နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ရှင်းပြပါမယ်။ အခုတော့ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချက်က ဘာလဲ ဆိုတာ နားထောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါမယ်။
ဒါတွေက အသုံးဝင်တဲ့ အကြံပေးမှုတွေပါ။ ပထမဆုံး ပြောတဲ့သူက ‘should’ ဆိုတဲ့ စကားလုံကို သုံးပါတယ်။ အဲဒီ ‘should’ ရဲ့ နောက်မှာ ဘာ လိုက်သလဲ ဆိုတာ သတိပြုမိပါလား။
အင်္ဂလိပ်လို နေ့စဉ် မှတ်တမ်း ရေးသင့်ပါတယ်တဲ့ ။ အဲဒီ should ဆိုတဲ့ စကားလုံး နောက်မှာ to ဆိုတဲ့ စကားလုံး မပါဘဲ write ဆိုတဲ့ ကြိယာကို ကပ်လိုက်ပါတယ်။
Yes, they used the verb ‘write’ without ‘to’. So after ‘should’ you just need the verb, no ‘to’. So after 'should' you don't need 'to'.
အခုတော့ အသံထွက်ပြီး အတူ ပြောကြည့်ကြပါမယ်နော် Sian ရဲ့ နောက်က လိုက်ဆိုကြည့်ပါ။
သိပ်ဟုတ်တာပဲနော်၊ ဒါဆိုရင် နောက်တစ်မျိုးဘယ်လို အကြံပြုနိုင်မလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြပါဦးမယ်၊ စောစောက ပြောတဲ့အထဲမှာ 'how about..?' ဆိုတာလည်း ကြားခဲ့ကြပါတယ်။
Yes, but did you notice what follows ‘how about’?
ဒီတော့ 'how about..?' ရဲ့ နောက်မှာ ဘာလိုက်တယ် ဆိုတာရော မှတ်မိကြပါရဲ့လား
That’s right, so you need 'verb' + ing. Careful with the pronunciation – this isaquestion so your intonation needs to rise.
ဟုတ်ပါတယ်။ 'how about..?' ရဲ့နောက်မှာ 'verb' + ing. လိုက်ပါတယ်။ အသံထွက်ပုံကိုတော့ ဂရုစိုက်ပါနော်၊ မေးခွန်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆုံးမှာ အသံကို မြှင့်ပြောဖို့ လိုပါတယ်။ အတူတူ အသံထွက် ပြောကြည့်ကြပါမယ်၊ Sian ရဲ့ နောက်ကနေ လိုက်ပြောကြပါမယ်။
ဟုတ်လိုက်တာ၊ ဒါဆို အခု အကြံပေးတဲ့အခါ ဘယ်လို့ သုံးနှုန်းမလဲ ဆိုတာ လေ့လာဖို့ နောက် တစ်ခုပဲ ကျန်တော့တယ်၊ ဟုတ်တယ်နော်။
'have to'. ကိုသုံးပြီး ပြောမှာပါ။ ဒါကတော့ ပိုပြီး တိုက်တွန်းတဲ့ သဘော ရောက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ခုခုကို လုပ်ကို လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ခံစားလိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာ 'have to'. ကို သုံးပါတယ်။
So 'have to' is followed by the (infinitive) verb. Shall we look at the pronunciation quickly?
'have to' ရဲ့ နောက်မှာ (infinitive) verb. လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လို အသံထွကလည်း ဆိုတာ မြန်မြန်လေး နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးမယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ 'have' နဲ့ 'to' ကို အတူတွဲပြီး အသံထွက်မယ် ဆိုရင် hafta’. လို့ ထွက်ပါတယ်။
ကဲ အခုတော့ နားထောင်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း အကြံပေးတဲ့ အခါ သုံးပုံ သုံးနည်းတွေကို သိသွားကြပြီဆိုတော့ လေ့ကျင့်ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ တစ်ယောက်ရဲ့ ပြဿနာကို အရင်ဆုံး နားထောင်ကြည့်ပါ
ခေါင်းကိုက်တယ် ဆိုတော့ ဆေးသောက်ဖို့ ပြောရမှာပေါ့၊ should' ဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးပြီး ဘယ်လို ပြောမလဲ၊ ပြောကြည့်ပါနော်။
ပြောတဲ့ အတိုင်း ပြောခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား၊
အခု နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ ပြဿနာကို နားထောင်ပါဦး
'get fit' ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ချင်တယ်တဲ့၊ ဒါဆို gym ကို သွားဖို့ အကြံပေးရအောင်ပါ။ ဒီတခါတော့ 'how about? ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးပြီး ပြောပါမယ်။ ဘယ်လို ပြောမလဲ
Sian ပြောသလို ပြောခဲ့ကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်၊
Sian က သူငယ်ချင်းတွေကို ကောင်းကောင်းလေး အကြံပေးဖို့ အခု လေ့ကျင့်သင့်တယ် ထင်တယ်လို့ အကြံပေးပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံပေါ့၊ ပြီးတော့ 'How do I…သင်ခန်းစာတွေသစ်တွေကို ထပ်လေ့လာဖို့ နောက်တစ်ပတ် ဒီနေရာမှာ ပြန်ဆုံကြရင်ရော၊ how about joining us next week?
မိတ်ဆွေကို အကြံပေးဖို့ ဘယ်လိုနည်းတွေ သုံးနိုင်သေးလဲ။ သုံးနိုင်တဲ့ နည်းတွေကတော့ ….
အလေးအနက် အကြံပေးတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လို သုံးသင့်လဲ။
'have to' ကို သုံးပါ။
You should နဲ့ You have to တို့ရဲ့နောက်ကဆိုရင် မူရင်းကြိယာ လိုက်ရပြီး၊ 'how about' ဆိုရင်တော့ 'the verb + ing' ပုံစံလိုက်ရပါတယ်။
• You should writeadiary in English.
• You have to visit BBC Learning English
• How about listening to music in English and learning the lyrics?
How about ရဲ့ နောက်မှာ လိုက်ရမယ့် ကြိယာပုံစံကို အလေးထားစဉ်းစားပါ။
a getting 4YCZ4YC94YCU4YC54YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICAnaG93IGFib3V0JyDhgJvhgLLhgpUg4YCx4YCU4YCs4YCA4YC54YCZ4YC94YCs4YCG4YCt4YCvIOGCgOGAgOGAreGAmuGArOGAgOGAreGAryBWK2luZyDhgJXhgK/hgLbhgIXhgLYg4YCc4YCt4YCv4YCA4YC54YCW4YCt4YCv4YKUIOGAnOGAreGAr+GAleGAq+GAkOGAmuGAueGBiw==
b to get 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICAnaG93IGFib3V0JyDhgJvhgLLhgpUg4YCx4YCU4YCs4YCA4YC54YCZ4YC94YCs4YCG4YCt4YCvIOGCgOGAgOGAreGAmuGArOGAgOGAreGAryBWK2luZyDhgJXhgK/hgLbhgIXhgLYg4YCc4YCt4YCv4YCA4YC54YCW4YCt4YCv4YKUIOGAnOGAreGAr+GAleGAq+GAkOGAmuGAueGBiw==
c get 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICAnaG93IGFib3V0JyDhgJvhgLLhgpUg4YCx4YCU4YCs4YCA4YC54YCZ4YC94YCs4YCG4YCt4YCvIOGCgOGAgOGAreGAmuGArOGAgOGAreGAryBWK2luZyDhgJXhgK/hgLbhgIXhgLYg4YCc4YCt4YCv4YCA4YC54YCW4YCt4YCv4YKUIOGAnOGAreGAr+GAleGAq+GAkOGAmuGAueGBiw==
Which piece of advice is correct? ဘယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ ပုံစံက အမှန်လဲ။
a You should to practise your English withafriend. 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICdzaG91bGQnIOGAm+GAsuGClSDhgLHhgJThgKzhgIDhgLnhgJnhgL3hgKwgJ3RvJyDhgJnhgJzhgK3hgK/hgIDhgLnhgJvhgJXhgKvhgJjhgLDhgLjhgYs=
b I think you should read news stories in English. 4YCZ4YC94YCU4YC54YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGL
c You have to buyingagood dictionary. 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICAndG8nIOGAseGAlOGArOGAgOGAueGAmeGAveGArCAnYnV5JyDhgIbhgK3hgK/hgJDhgLLhgLcgVjEg4YCA4YCt4YCvIOGAnuGAr+GAtuGAuOGAluGAreGAr+GClCDhgJzhgK3hgK/hgJXhgKvhgJDhgJrhgLnhgYs=
အလေးအနက် အကြံပေးရင် ဘယ်ပုံစံသုံးမလဲ။
a How about taking some medicine? 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICDhgKHhgLHhgJzhgLjhgKHhgJThgIDhgLkg4YCh4YKA4YCA4YC24YCx4YCV4YC44YCQ4YCy4YC34YCh4YCB4YCrICdoYXZlIHRvJyDhgIDhgK3hgK8g4YCe4YCv4YC24YC44YCb4YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGL
b I think you should eat more fruit and vegetables. 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICDhgKHhgLHhgJzhgLjhgKHhgJThgIDhgLkg4YCh4YKA4YCA4YC24YCx4YCV4YC44YCQ4YCy4YC34YCh4YCB4YCrICdoYXZlIHRvJyDhgIDhgK3hgK8g4YCe4YCv4YC24YC44YCb4YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGL
c You have to go to the doctor's. 4YCZ4YC94YCU4YC54YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLICDhgKHhgLHhgJzhgLjhgKHhgJThgIDhgLkg4YCh4YKA4YCA4YC24YCx4YCV4YC44YCQ4YCy4YC34YCh4YCB4YCrICdoYXZlIHRvJyDhgIDhgK3hgK8g4YCe4YCv4YC24YC44YCb4YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGL
နောက်အစီအစဉ်ကိုလည်း နားထောင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ့် အသုံးတွေ၊ နားလည်နိုင်စွမ်းရည်တွေ တိုးလာနိုင်ပါတယ်။